बिष्णु माझीको कुरा गर्दा यस्तो भन्छन माइती भाइ ! उनको गाएक बन्ने यस्तो सपना !
पोखरा। झण्डै डेढ दशकदेखि लोकदोहोरी क्षेत्रमा सक्रिय गायिका विष्णु माझीले अहिलेसम्म हजारौं गीतमा आवाज दिएकी छिन् । उनको आवाज मन नपराउने र उनको आवाजको तारिफ नगर्नेहरु कमै भेटिन्छन् । प्रत्यक्ष रुपमा भेटेरै उनको खुलेर प्रशंसा गर्न चाहेनहरु पनि थुप्रै छन् । तर विष्णुले आफ्ना प्रशंसकहरुलाई अहिलेसम्म यो मौका दिन सकेकी छैनन् । उनी मात्र स्टुडियो र घरमा सिमित छन् । विष्णुको जीवनशैली अचम्मको छ । उनी आफ्नै पारामा स्टुडियो आउँछिन् । गीत गाउँछिन् अनि घर फर्किन्छिन् ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली आज भारत प्रस्थान गर्ने
लेगानेसमाथि रियल मड्रिडको शानदार जित